Burchell's Zebra - Ezanyisayo - Mzantsi Afrika
Burchell's Zebra (Equus burchelli)
Iimpawu zomzimba zincinci kakhulu kwaye zibanzi kunokuba zeCape Mountain Zebra, kanti imivimbo yomzimba ijikeleza esiswini. Ukubetha komlenze akugqithisi kakhulu. Amanyathelo 1.3 ukuya kuma-1.4 emitha emagxeni kwaye anzima 300-320 Kg. Zijikeleza iindlebe malunga ne-160-170 mm ubude. Inxalenye yangaphambili ye-mane yenza i-black tuft phakathi kweendlebe.
Ngokuqinisekileyo umzingeli, ukondla kwiindawo ezinengca I-Zebra inomlomo ophezulu onobuchule obunokuthi uqoke umquba ngokuqokelela ingca phakathi komlomo kunye namazinyo angezantsi phambi kokucoca isivuno.
Umzalisi ongeyenaxesha, amantsontsho angazalwa nakweyiphi na inyanga. Nangona kunjalo, phantsi kweemeko eziphezulu iintlobo ezininzi zezilwanyana zizalelwa ngexesha lehlobo. Emva kwexesha lokubanjwa kweentsuku ezingama-360-390, izalana elilodwa lizalwa, lilinganisa i-30-35 Kg. Iintsi zixilwe kwiinyanga eziyi-11.
I-Zebra yeBurchell ihlala kwiinkalo ezincinci zentsapho, ngokuqhelekileyo ziqukethe i-stallion esinye kunye nehashe elinye kunye neentombi zazo. Amagqabi angabhalwanga ayenzeka kumaqela awodwa, angenabhinqa. Iintambo ziphakathi kweminyaka emine ukuya kwe-12 ubudala. Imingxuma yamanzi ngokubambisana neendawo ezithandwayo zokutya zikhangele amaqela entsapho adibanisana ngokubanzi ngamanani amaninzi. Zihlala zibonwa ngokubambisana kunye neWildebeest, ezinye iintlobo ze-Antelope kunye neBaboons.
Iindawo ezincinci zengca zengingqi ye-savanna kunye namathafa enxweme ziquka indawo yokuhlala. Ukuxhomekeka kwazo emanzini kunqanda i-Zebra yeBurchell ukunyuka ngaphezu kweyeshumi ukuya kwi-12 km ukusuka kwamanzi. Imimandla eninzi enezityalo iyanqandwa.
Ngokuqinisekileyo ilungu leentsapho zehashe. Le ntlobo yiyona mikhulu kunazo zonke iintlobo ezihlukeneyo ezihlala kwindawo yaseMzantsi Afrika yokuphila kwendawo yasendle. Iibanga zeZebra zeBurchell kunye ne-Cape Mountain Zebra zidibeneyo. Intaba yaseKapa i-Zebra igxininiswe kwimimandla yeentaba zaseKapa, ​​kanti i-Zebra yeBurchell iyahambelana nemithi kunye namathafa anengca.
I-Zebra yeBurchell yeyona ntloye neQuagga ephelayo ehamba ngeentlanzi ezisemazantsi eMzantsi Afrika kude kube ngekhulu le-19, ngokusondele kakhulu ukuba inzululwazi zisebenzisa i-DNA kumntu okhethiweyo ukuba azame ukubuyisela i-Quagga. Kwaye zenzwe ngendlela efana neminwe ebantwini. Kuthiwa i-Zebra engumntwana ihlala kufuphi nomama ukuba ifake iipateni zayo. I-Zebra yaseBurchell yasezantsi yeZebra inomgca obomvu -obomvu kumgca omhlophe, uphawu olunciphisa ukunyuka komntla.